९ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
सयपत्री समाज कास्कीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा वक्ताहरूले विधेयक स्वायत्त बन्न नसकेको र थुप्रै संशोधनपछि मात्र संसदबाट पास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आफ्नो अध्ययन पत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमा रहेका दफा तथा उपदफा एक आपसमा बाझिएको बताउँदै केही दफा हटाउनुपर्ने र केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले दफा (८)र (३३) ले प्रदेशमा गठन हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न नदिएको बताउँदै स्वायत्त नहुने हो भने प्रतिष्ठान गठनको औचित्य नै नरहने विचार व्यक्त गरे । गण्डकी प्रदेशका भाषा संरक्षणमा विधेयक मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको र प्रदेशका विविध मौलिक विशेषतालाई समेट्ने कुरामा विधेयक नराम्रोसँग चुकेको पनि उनले बताए । २४ जनाको प्राज्ञसभा अलि ठूलो हुने भन्दै यसलाई १५ जनामा झार्दा उत्तम हुने सुझाव पनि उनले राखेका थिए । उनले विभिन्न दफा र उपदफाका कमजोरी सच्याउन बुँदागत सुझावसमेत पेश गरेका थिए ।
विधेयक नै स्वायत्त नबनेपछि त्यसपछि बन्ने नियम, विनियमले प्रतिष्ठानको गरिमा जोगाउन नसक्ने हुँदा यो विधेयक हुबहु पारित हुन नहुने भन्दै खबरदारी गर्नुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिए । यसरी विचार व्यक्त गर्नेहरूमा प्रा।डा।कुसुमाकर न्यौपाने, प्रा.डा. यदुनन्दन उपाध्याय, डा. यामनाथ तिमिल्सिना, डा.लक्ष्मीशरण अधिकारी, प्रा.डा. रविलाल अधिकारी, रामराज रेग्मी, प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराई, पद्मराज ढकाल, नारायण मरासिनी, परशुराम कोइराला, भीम रानाभाट, लोकबहादुर क्षेत्री, प्रा.डा. उमानाथ बराल, सुरज उपाध्याय, सञ्जीव पौडेल, नारायण परिश्रमी, कल्पना चिलवाल, लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।